26 | February | 2010 | San Oo Aung's Weblog
Posted on February 26, 2010 by tunaung
Posted on February 26, 2010 by sanooaung
DVB:Detained Burmese migrants stage hunger strike
May 25, 2009 (DVB)–Around 600 Burmese migrants being held in poor conditions inaMalaysian detention centre stagedahunger strike last week in protest against their denial of access to United Nations refugee officials.
The New Era Journal:ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုဟု ဦးတင်ဦးပြောကြား
YANGON, Feb 26 – Myanmar’s Supreme Court on Friday rejected an appeal by pro-democracy leader Aung San Suu Kyi against her house arrest,aruling diplomats said would cast further doubt on the legitimacy of this year’s election.
Culture-clash comedy ‘East is East’ gets sequel
NEW DELHI, Feb 26 – In 1999, the low-budget film “East is East,” about the clash of cultures inaMuslim Pakistani family living in Manchester, becameasurprise worldwide hit, winning awards and grossing over $15 million (9.8 million pounds).
SPDC never really care for the health and education of its citizens (in Burmese)
SPDC never really care for the health and education of its citizens
Source: Khit Pyine or New Era journal
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နှလုံးခွဲစိတ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် လွန်စွာကြီးမားသဖြင့် စရိတ်မတတ်နိုင်သော လူနာအများစုမှာ ဆေးကုသမှု မခံယူနိုင်ဘဲ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး နှလုံးခွဲစိတ် ကုသဆောင်မှ လူနာများက ပြောကြားသည်။နှလုံးရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသရာ၌ နှလုံးအဆို့ရှင်အပါအ၀င် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ထည့်သွင်းကုသရာတွင် သိန်း ဆယ်ဂဏန်းနှင့်ချီ ကုန်ကျနေပြီး နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ်မှ စိုက်ထုတ်ကျခံခြင်း မရှိကြောင်းလည်း အဆိုပါ လူနာများက ပြောသည်။